I-Hushstay x Raahat iyindlwana eyakhiwe ngamatshe eyingqayizivele emiswe ku-5500 ft edolobhaneni elincane elibizwa ngokuthi i-Jalna cishe amakhilomitha angama-30 ukusuka e-Almora. Le ndawo izungezwe izihlahla zikaphayini, i-oki kanye ne-rhododendron futhi ibheke iziqongo eziphakeme ze-Himalayan ezifana ne-Trishul ne-Nanda Devi.
Kusukela emakamelweni athokomele aneziko lawo elingaphakathi kuya endaweni yokudlela engaphandle enokubukwa kokubukwa, yonke indawo nasemakhona e-Hushstay x Raahat kuchaza ukuthula nokuthula.
Imigwaqo emazombezombe ikuholela endlini encane enhle ebizwa ngokuthi i-Jalna: Isigodi esincane, esingaba ngu-30 km ukusuka edolobheni elidumile elisezintabeni lase-Almora.
I-Raahat, njengoba negama liphakamisa, ukuphunyuka endaweni evamile: Indawo lapho ungadedela khona zonke izinkathazo zakho futhi ube nje.
Lapha wamukelwa uhlaza oluluhlaza, ukutshiyoza okumnandi kwezinhlobonhlobo zezinyoni nokubona iziqongo ezimbozwe yiqhwa buqamama. Njengoba ilanga lishona, isibhakabhaka siphenduka sibe nemithunzi ebomvu, esawolintshi kanye ne-violet futhi kamuva simbozwe izinkanyezi eziyisigidi.
I-Hushstay x Raahat inamakamelo angu-02 ahlotshiswe kahle futhi avulekile anamafasitela amakhulu abheke indawo enokuthula.
Ngaphakathi emakamelweni, uzothola izici zesiko lendawo lama-kumaoni: Izindonga eziwugqinsi ziqediwe ngengxube yodaka namatshe atholakala endaweni, izibani, kanye neminye imihlobiso, yenziwe abantu bendawo basezigodini ezizungezile futhi. ophahleni has a cladding ngokhuni ukunikeza amakamelo umuzwa ofudumele.
Imibhede enethezekile ehlanganiswe neziko elingaphakathi inikeza imfudumalo nokunethezeka okudingekayo ngobusuku obubandayo basebusika futhi amafasitela amakhulu avumela ukungena komoya omusha wasezintabeni ngosuku lwasehlobo. Ngosuku lwesimo sezulu esicwathile, uyakwazi ukubona iziqongo ze-Himalayan ezimbozwe yiqhwa ukusuka kuntofontofo yombhede wakho.
Phuma ngaphandle kwegumbi futhi uzothola intelezi efanayo yomhlaba wakudala ibonakala esikhaleni esiyimfihlo sokuhlala esilungele lelo tiye lakusihlwa noma intambama yobuvila.
Uma ubhukha nathi, uzoba nayo yonke indawo uwedwa. Idili nge-Kumaoni Cuisine emnandi elungiselelwe umpheki wethu wasendlini, thatha uhambo oluya edolobhaneni eliseduze, ugibele phezulu egqumeni ukuze ubuke ukushona kwelanga noma uvele unqene futhi uvumele abasebenzi bethu ukuthi banakekele zonke izidingo zakho ngokunaka okukhulu.
Njengoba igama liphakamisa, i-Hushstay x SUKOON kanye ne-RAAHAT zonke zimayelana nokuthula nokuthula. Indawo lapho ungadedela khona yonke into futhi uchithe isikhathi ungenzi lutho nhlobo.
Zivimbezele ku-hammock, funda incwadi noma ugqolozele ngokungapheli eziqongweni ezimbozwe yiqhwa ezikude. Khuphuka umqansa ukuze ubukele ukushona kwelanga okujabulisa kakhulu futhi uthole ukubuka okungu-180-degree kwendawo ekuzungezile. Hlola amadolobhana aseduze kanye ne-bungalow endala yaseBrithani ehamba ngezinyawo.
Uma ungathanda ukuphuma, ungashayela wehle uye e-Dol Ashram edumile noma e-Binsar Wildlife Sanctuary ukuze uthole i-jungle safari, i-Kasar Devi ukuze uthole imibono namakhefi kanye nedolobha lase-Almora ngesidlo sasendaweni esimnandi esibizwa ngokuthi "i-Baal Mithai".
Sinomnakekeli kanye nompheki wasendlini ozokusiza nganoma yini ongayidinga. Noma ngabe kukhulunywa nje ngendawo ezungezile namasiko endawo.